Wax ka ogow dhammaan kooxaha usoo gudbay wareegga 16-ka tartanka Champions League iyo sida ay isugu aadi karaan – Gool FM
Wax ka ogow dhammaan kooxaha usoo gudbay wareegga 16-ka tartanka Champions League iyo sida ay isugu aadi karaan
(Yurub) 10 Dis 2020. Waxaa soo dhammeystirmay 16-ka koox ee ka qayb gali doona wareegga 16-ka tartanka Champions League, waxaana kooxaha ugu awoodda badan ee tartankan ciyaaraya ay ku soo bexeen boosaska koowaad ee Guruubyadooda.
Taasi waxay ka dhigan tahay in marka la sameynayo isku aadka wareegga 16-ka ee tartankan ay soo bixi doonaan kulammo aanan sidaas u kululeyn.
Kooxaha loo saadaalinayo tartankan sida Bayern Munich, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City iyo Juventus ayaa dhammaantood ku soo baxay boosaska koowaad ee guruubyadii ay ku jiraan taasoo la micno ah inaysan isku beegmi karan marxadda soo aaddan, maadaama kooxaha isku booska kusoo baxay aysan isku aadi karin.
Dheriga kooxaha boosaska koowaad kusoo baxay waxaa sidoo kale ku jiraa Borussia Dortmund iyo Chelsea oo qayb ka ah kooxaha ugu awoodda badan tartankan.
Marka laga reebo Barcelona iyo Atletico Madrid, kooxaha kale ee kusoo baxay boosaska labaad ee guruubyadooda ayaa ah kuwa aanan loo saadaalineyn hanashada tartankan.
Porto, Lazio, RB Leipzig, Atalanta, Sevilla iyo Borussia Monchengladbach ayaa ku jira dheriga labaad, waxaana ay ku kala beegmi doonaan kooxaha ku jira dheriga koowaad.
Kooxaha isku waddanka ah ayaanan isku aadi doonin, si la mid ah kooxaha isku guruubka ka soo baxay iskuma beegmi doonaan.
Tusaale ahaan, Real Madrid kuma aadi doonto Barcelona, Atletico Madrid iyo Sevilla maadaama ay ka wada dhisan yihiin dalka Spain, si la mid ah kuma aadi karto Monchengladbach maadaama ay hal guruub ka soo wada bexeen.
Isku aadka wareegga 16-ka tartanka Champions League ayaa la sameyn doonaa Isniinta soo aaddan ama 14-ka bishan Diseembar.
Kylian Mbappe oo garaacay rikoor uu Lionel Messi ka dhigay Champions League
Neymar oo markale ka hadlay mustaqalkiisa xilli dhowaan uu shaaciyay in isaga iyo Messi ay wada ciyaari doonaan sanadka dambe